တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦးချစ်တယ် ဆိုတာကလည်း ချမ်းသာပေးနိုင်တုံး ခဏ ပါ…။
အပြန်အလှန်ချမ်းသာ မပေးနိုင်တဲ့အခါ….. ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေကွာကျ ကုန်ကြရတော့တာ..။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တွေ မှာလည်းဒီလိုပါပဲ ။
ခေတ္တ- ပန်းသခင် တည်းခိုခန်း၊ ဘိုကလေးမြို့ကို Select ပေးပြီးရေးပါ... Type your summary here. ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ... Type the rest of your post here.
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:32 AM